I-Villa Pool eNtofontofo i-Villa Fiji 1 - (iqinisekisiweyo iFiji Care)
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguTaro
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uTaro iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-villa yangoku yokulala ye-4 ene-infinity pool ejonge iNadi Bay. Iimbono ze-270 zePanoramic ze-bay. Ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya kweli-10 kuphela ukuya elunxwemeni lwabucala nokufikelela ngokulula kwiziqithi ezingaphandle kunye nemizuzu nje eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseNadi. Umphathi wethu wevilla onobubele kunye nabasebenzi bazinikele ekwenzeni ukuhlala kwakho nathi kukhumbuleke kangangoko kunokwenzeka. Isampulu yesidlo sethu esimangalisayo saseFijian Lovo esiphekwe kwi-oveni engaphantsi komhlaba okanye isidlo sabucala sompheki eso sidlo sikhethekileyo.
** PHAWULA **
Nceda usithumelele i-imeyile ukuba indawo idwelisa 'ayifumaneki' ngemihla yakho yokuhamba ethile.
Sineevillas ezi-3 kodwa inkqubo yokubhukisha ayiphenduli ngaloo nto. Ke kunokwenzeka ukuba enye yeevillas ibekhona ngeentsuku zakho zokuhamba.
** INKONZO EYODWA **
Singalungiselela lula isithuthi sokuthathwa kwesikhululo seenqwelomoya, ukuhla, uhambo lokuthenga kunye nokhenketho nangaliphi na ixesha ngamaxabiso akhuphisanayo. Ukuqesha uhambo lokuthenga, ukubona indawo, uhambo lwesidlo sangokuhlwa okanye naluphi na uhambo, olufutshane okanye olude. Umphathi wethu we-villa uya kunika iinkcukacha kunye namaxabiso ekungeneni.
Sikwabonelela ngamatheko omhla wokuzalwa, amatheko omtshato okanye nawuphi na umcimbi okhethekileyo. Sazise nje kumbuzo wakho kwaye siza kulwenza lube lolukhethekileyo uhambo lwakho.
Iivillas, ezibekwe kwiihektare ezili-100 zolonwabo lwabucala lwetropiki, zezanamhlanje, ziphangalele, zinobunewunewu kwaye uninzi lwazo zonke, ziphumle kakhulu!
Ufika kwisikhululo seenqwelomoya saseNadi eFiji (iinqwelomoya ezithe ngqo zisuka eLAX, eSydney, eBrisbane, eHong Kong, eSeoul, eHawaii, eAuckland) kwaye wamkelwa ngabasebenzi bethu abanobuhlobo, abaya kukukhwebula kwi-villa yakho imizuzu eli-15 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kodwa oko kubonakala kukwilizwe elitsha ngokupheleleyo elikweleenjiko. Abasebenzi bethu baya kubonelela ngeemfuno zakho zonke kwaye bakunyameke njengookumkani kunye nookumkanikazi okanye bakuvumele ukuba wonwabe wedwa. Ukhetho lolwakho!
Ezi villas zizindlu zabucala zabanini kodwa okwexeshana zinika abanye abantu ukuba banandiphe indalo yabo!
Vuda Marina - 2 mins ngemoto okanye 15 min ukuhamba
I-Anchorage Beach Resort - 1 min ngemoto okanye ukuhamba okufutshane
Indawo yokutyela yokuQala yokuHlala-imizuzu emi-3 ngemoto okanye imizuzu engama-25 ukuhamba
Mfutshane 12-15 min ukuhamba ukuya kulwandle lwabucala
Isikhululo seenqwelomoya saseNadi-imizuzu eyi-15 ngemoto
Iziqithi zangaphandle ziyafikeleleka kwidokhi yaseAnchorage
I-Denarau Marina-imizuzu engama-30 ngemoto okanye ngesikhephe
Abasebenzi baseSapphire Bay baya kukubulisa kwisikhululo seenqwelomoya kwaye bakukhaphe ukuya kwindawo yakho yokuhlala. Abasebenzi bethu baya kufowuna ngexesha lokuhlala kwakho ukuba unayo nayiphi na imibuzo. Siza kukunika inombolo yefowuni yasekuhlaleni ukuba uyifowunele xa ufika.
Ububele babantu baseFiji, ngakumbi abasebenzi bethu abonwabileyo kunye nabantu abanobuhlobo kwilali yaseViseisei baya kuyenza iholide yakho ikhumbuleke kwaye iphumle. IViseisei yayiyenye yeelali zokuqala ukuhlalwa ngamaFiji kwaye iyimbali ephawulekayo. Unokuhamba uye kwidolophana engaselunxwemeni, udibanise nabahlali belali kwaye ufunde ngamasiko nezithethe zabo.
Ibhafu yodaka yemithombo eshushu yendalo (eqinisekileyo kufuneka ifumaneke) kunye nezitiya zeorchid ezidumileyo zikude ngemizuzu eyi-10 kuphela. Ukunyuka intaba, ukukhwela umlambo, ukukhwela i-ATV, ukutyibilika kwejethi, ukuloba kunye neminye imisebenzi emininzi kule ndawo.
Isidlo saseFiji esimnandi esibizwa ngokuba yi ‘Lovo’ (ukutya okuphekwe phezu kwamatye amhlophe ashushu kwionti engaphantsi komhlaba) kuyimfuneko xa useFiji. Abasebenzi bethu banokubetha-umthendeleko we-Lovo wabucala omnandi kanye kwi-villa yakho kwaye ufumana uncedo kuwo onke amalungiselelo okuhambisa ukutya, ukuthunga iingobozi zekhokhonathi ukubamba imveliso kunye nokwakha umlilo wamatye ashushu. Ulonwabo olukhulu olungalibalekiyo kusapho lonke!
Kukho iibhasi zasekhaya ezihamba rhoqo ngemizuzu engama-30 ukuya eLautoka okanye eNadi. Iiteksi ziyafumaneka nangexesha elifutshane kwaye zixabisa ngokufanelekileyo. Nceda uqhagamshelane nathi ngayo nayiphi na imibuzo. Abanini bahlala eFiji iminyaka engaphezu kwe-25 kwaye bayazazi iindawo ezifanelekileyo zokutyelela. Uninzi lwabasebenzi bethu bebesebenzela usapho iminyaka engaphezu kwama-20 kwaye balungile nabantwana. Zonke iindwendwe zethu ziba yinxalenye yosapho nazo. Ububele baseFiji bukwiDNA yethu. Musa ukubanjiswa kwigumbi elincinci lehotele. Nje ukuba ufumane iFiji yokwenyani kunye nathi, awusoze ufune ukuhlala ehotele kwakhona.
Akukho ntlawulo yokugqibela (yokuphela kokuhlala) yokucoca! Ukuba ufuna ukucoca imihla ngemihla, sinokuyilungisa loo nto. Sisenokwenza amalungiselelo okuba igrosari yakho ithengwe kwaye iziswe kwi-villa yakho kunye nompheki wobuqu okanye umhlohli weYoga ukuze uphumle kwaye uchutywe!
Ixabiso libandakanya i-VAT kunye neerhafu zehotele.
4.78 ·Izimvo eziyi-110
4.78 · Izimvo eziyi-110
Umbuki zindwendwe ngu- Taro
Sinomphathi ozinikeleyo we-villa ofumanekayo 24/7 ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho. Umphathi wevilla uhlala ngexesha lemini kwaye uyafumaneka ngefowuni ngaphandle kweeyure ukuba ufuna nantoni na. Sikwanabo nabasebenzi basegadini/epool, abanonopheli kunye nokhuseleko kwisiza abanobubele kakhulu kwaye baya kukunceda ube neholide entle.
Sinomphathi ozinikeleyo we-villa ofumanekayo 24/7 ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho. Umphathi wevilla uhlala ngexesha lemini kwaye uyafumaneka ngefowu…
Iilwimi: English, Deutsch, 日本語, 한국어